अफगानिस्तानः आत्मघाती कार बम विस्फोट, १३ जनाको मृत्यु. – Sabaikoaawaj.com
अफगानिस्तानः आत्मघाती कार बम विस्फोट, १३ जनाको मृत्यु.
शनिबार, जेष्ठ १३, २०७४ 8:42:06 PM	मा प्रकाशित
अफगानिस्तान १३,जेठ / अफगानिस्तानको पूर्वी शहर खोस्टमा आत्मघाती कार बम विस्फोट हुँदा कम्तिमा १३ जनाको ज्यान गएको छ । घटनामा अरु केही घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा दुई बालबालिका पनि रहेको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ ।
रमजान महिनाको पहिलो दिन खोस्ट शहरको मध्य भागमा प्रहरीको गाडीलाई लक्षित गरी आत्मघाती कार बम विस्फोट भएको हो । घटनाको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले लिएको छैन । तर तालिबान वा इस्लामिक स्टेट आइएसले विस्फोट गराएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अफगानिस्तानका विभिन्न ठाउँमा पछिल्लो समय हिंसात्मक गतिविधि बढेको छ । त्यसमा धेरैजसो घटनामा तालिबानको संलग्नता छ । १२ जेठ मात्रै कान्दहार प्रान्तको आर्मी बेस क्याम्पमा तालिबानले गरेको आक्रमणमा १५ जना सैनिकको ज्यान गएको थियो ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, जेष्ठ १३, २०७४ 8:42:06 PM